Ndiyi-Cisco I-Prize Finalist-Nceda uxhase umbono wethu | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 4, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ayisoloko ifika ithuba elinje- ithuba lokuphumelela i-250,000 yeedola kwaye usebenze nenkampani efana nayo ServerAdmin ukwenza umbono wakho ube yinyani!
Ngaphambi kokuba uqhubeke, singayisebenzisa inkxaso yakho. Nangona isicelo sethu sifikile kumagqibela kankqoyi, sijonge ukukhanya kwiivoti. Ukuba ukuvota kusavuliwe, singavuya ukuba ungasibhalisa kwaye usivotele:
Bhalisa kwiWebhusayithi ye-I-Prize ye-Cisco
Ngena kwaye ucofe u "Khuthaza" kumbono we-SaaS POS.
Uyintoni umvuzo we-I?
Cofa uqonde ukuze ubone ICisco I-Ibhaso yokuzonwabisa
Kudala ndisebenza kwishishini lokutyela ixesha elaneleyo ngoku ukuze ndiqonde ukuba eyona micimbi iphambili ajongene nayo abaSebenzisi kukukwazi ukufumana nokwamkela itekhnoloji ngokulula nangokungabizi mali ininzi. Inyaniso mayixelelwe, ishishini liphelelwe lixesha… Indawo yokuThengisa iya kuxabisa ngaphezulu kwe-10% yeenkampani zokuqalisa iindleko kwaye ubuchule beenkqubo bunqongophele kakhulu.
Inkampani endisebenza kuyo ngoku ibiyinkokeli yokudibanisa uku-odola kwi-Intanethi kunye neenkqubo zePOS. Kungumceli mngeni omangalisayo, nangona. Iinkqubo ze-POS, ubuncinci, ishumi leminyaka ngasemva kwitekhnoloji kwaye ayilungelanga ngokupheleleyo i-ecommerce ngewebhu. Endaweni yokuvula iinkqubo zabo zokudityaniswa kwe-Intanethi, iinkampani ze-POS ngoku zifuna iindleko ezongezelelekileyo zelayisensi ezineempawu ezingathembekiyo nezingaphelelanga, ezibangela ukuba ibe yintloko yokwenyani kwiinkampani ezinje ngam kunye ne-restaurateur.
Ngelixa izicelo zeOfisi, iiNkqubo ze-imeyile kunye neNkqubo yokuLawulwa kobudlelwane nabaThengi ziye kwiSoftware njengeNkonzo, iinkqubo ze-POS khange zibekho kwaye lithuba elihle ngoku ukuba iinkampani ezininzi zithatha indawo ekuthatheni isisombululo. Ngale nto engqondweni, ndathumela umbono wam kwiwebhusayithi yeCisco, SaaS POS. Umbono kukuthatha isoftware ye-POS yangoku kwaye uyiqhube kwi-Intanethi kunakwisixhobo sePOS.
Izibonelelo zininzi-ukudityaniswa kunye noku-odolwa kwi-Intanethi kuya kuba ngumthungo. Kananjalo, kuvela amathuba amatsha, njengemivuzo, ukubhenka ebhankini, ukudityaniswa kwentengiso ye-imeyile, ukudityaniswa kweselfowuni, kunye nokubonelelwa kwemveliso (ukuphuma kwesalmon kuvelisa isilumkiso esicela umphathi ukuba aodole ngaphezulu. Uyavuma kwaye iodolo ithunyelwa ngombane).
UCisco usinike elona thuba lingummangaliso apha kwaye ndingathanda ukubona umbono uphumelela. Andikholelwa ukuba kukho inkampani efanelekileyo ngakumbi yokunceda ukuphuhlisa kunye nokwazisa umbono onje kwintengiso. Iziseko zophuhliso zenethiwekhi ziyafuneka, ukhuseleko, itekhnoloji yabathengi abaxineneyo… onke la ngamandla eCisco!
Gcina iliso IBhlog yeCisco I-Prize ngeenkcukacha ezongezelelekileyo.
Kwaye ungalibali ukukhuthaza umbono wethu !!! Iqela liquka mna, uBill Dawson, UCarla Ybarra-Dawson kwaye UJason Carr.
tags: ciscoIbhaso le-ciscoIcisco iprize
Epreli 4, 2008 ngo-6: 25 PM
Ndiye ndacofa kwiPromote! Ndiyathemba ukuba iyasebenza.
Epreli 4, 2008 ngo-6: 38 PM
Enkosi kakhulu ngenkxaso yakho, uShawn! Ndicinga ukuba sinesicelo esifanelekileyo kunye neetoni zamathuba okutshintsha imbonakalo yomhlaba. Khange kubonakale ngathi sinika ingqwalaselo eninzi ngaphandle kweejaji, nangona kunjalo, ndizama ukubetha iivoti ezithile.
Epreli 5, 2008 ngo-8: 55 AM
Ndichithe imizuzu eyi-10 yokugqibela ndizama ukwenza iakhawunti kuloo ndawo kwaye ndikuvotele. Nje ukuba ndidlule kwiimfuno zempazamo zegama eligqithisiweyo, bendihlala ndifumana izikrini zempazamo ze-ASP xa ndizama ukungenisa.
Ndizakuzama kwakhona kamva kwaye ngethemba lokuba ndingena! Uxolo!
Epreli 5, 2008 ngo-9: 13 AM
Nam ndicinga ukuba umbono ugqibelele. I-Intuit ikwenzile oku ngesoftware yobalo kwiminyaka eliqela eyadlulayo kwaye sisixhobo esihle sokutyela.
Ngelishwa, andicingi ukuba ungowokuqala ukukhuthaza umbono onje. Ndiyazi iinkampani ezimbalwa ezisebenza kumxholo ngoku. Ndiya kuvota, nangona kunjalo. Amandla kunye nezixhobo zeCisco zodlula zonke iinkqubo zokudlela zePOS zidityanisiwe!
Epreli 5, 2008 ngo-11: 05 AM
Kuvakala ngathi yinto enokuthi isafuna ukusebenza kwecala labathengi elibalulekileyo, mhlawumbi usebenzisa i-Adobe AIR? Okanye ayizukuba yiCisco-ish ngokwaneleyo?
Epreli 5, 2008 ngo-11: 16 AM
UMike-ulungile, ivenkile yedatha yendawo iya kuba yimfuneko kwimeko apho unxibelelwano luye lwehla. EMOYENI yayiyinkuthazo yokuthatha isigqibo sokuba ingaba oku kuyacaca okanye akunjalo. I-AIR ngokuqinisekileyo iya kwenza iqhinga, kodwa ukuba iCisco iphuhlise umxhasi omncinci, oko kungasebenza ngokufanayo!
Epreli 6, 2008 ngo-3: 42 AM
Oku kuhle - inhlanhla. Xa uphumelele, ndingathanda udliwanondlebe nendawo yam 😉